Vivo X30 र X30 प्रो: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र प्रक्षेपण | Androidsis
Vivo X30 र X30 Pro: Exynos 980 XNUMX० को साथ फोनको नयाँ दायरा
एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण को लागी बारी गर्नुहोस्, किनकि Vivo हामीलाई टेलिफोन को आफ्नो नयाँ दायरा संग छोड्छ। चिनियाँ निर्माताले आधिकारिक रूपमा Vivo X30 र X30 Pro प्रस्तुत गरेको छ। यी दुई नयाँ फोन आफ्नो उच्च दायरा भित्र छन्, जुन दुबै अवस्थामा 5G को साथ आउँछ। एउटा दायरा जुन यसको प्रोसेसर को उपयोग को लागी बाहिर खडा छ, किनकि उनीहरु यसको लागी सैमसंग को Exynos 980 छनौट गरेका छन्।
यो सैमसंग प्रोसेसर को लागी अन्य फोनहरुमा प्रयोग गर्न को लागी असामान्य छ, यद्यपि यस बर्ष हामीले पहिले नै देखेका छौं कसरी मोटोरोला उहाँले ती मध्ये एक को उपयोग गर्नुभयो। अब यी Vivo X30 र X30 प्रो अर्को को लागी एक छन्। ब्रान्ड आधिकारिक बनाइएको छ, त्यसैले हामी यसको सबै विवरण जान्दछौं।
दुई फोन डिजाइन साझा, एक छिद्रित स्क्रीन संग, जो तपाइँ अगाडिको पूर्ण लाभ लिन को लागी अनुमति दिन्छ। एक अधिक इमर्सिभ अनुभव यसैले यी दुई ब्रान्ड फोन मा अपेक्षित छ। रियर मा थोरै फरक छ, किनकि सामान्य मोडेल तीन क्यामेरा र प्रो मोडेल चार छ। दुबै स्क्रिन मुनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर एकीकृत।
1 Vivo X30 र X30 Pro को स्पेसिफिकेशन
Vivo X30 र X30 Pro को स्पेसिफिकेशन
यसको विशिष्टताको बारेमा, Vivo X30 र X30 प्रो धेरै तत्वहरु साझा गर्नुहोस् साझा मा। वास्तव मा, क्यामेरा मात्र फरक हो कि हामी चिनियाँ ब्रान्ड को यी दुई फोनहरु बीच पाउँछौं। बाँकी (स्क्रिन, ब्याट्री, र्याम, भण्डारण, प्रोसेसर) दुई को बीच उस्तै छ। त्यसैले प्रयोगकर्ताहरु चीनी ब्रान्ड को यी उच्च अन्त मोडेल को क्यामेरा मा आधारित छनौट गर्न सक्षम हुनेछन्। यसको विशिष्टता निम्नानुसार छन्:
VIVO X30 प्रो
SCREEN सुपर AMOLED 6,44 इन्च संकल्प 2.400 x 1.080 पिक्सेल संग सुपर AMOLED 6,44 इन्च संकल्प 2.400 x 1.080 पिक्सेल संग
प्रोसेसर Exynos 980 Exynos 980
राम 8 जीबी 8 जीबी
भण्डारण 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB
अपरेटिंग प्रणाली एन्ड्रोइड 9.0 पाई Funtouch 10.0 को साथ एक तह को रूप मा एन्ड्रोइड 9.0 पाई Funtouch 10.0 को साथ एक तह को रूप मा
रियर क्यामेरा 64 एमपी एपर्चरf/ 1.8 + टेलीफोटो लेंस के साथ 32 MP एपर्चरf/ 2.0 के साथ 2x ऑप्टिकल जूम + 8 MP एपर्चरf/ 2.2 चौडा कोण संग एफ / १. 64 एपर्चर सहित MP४ एमपी + एपर्चर सहित १३ एमपी टेलिफोटो लेन्स र ५ एक्स अप्टिकल जूम ३२ एमपी टेलीफोटो लेन्स एफ / २.० एपर्चर र २ एक्स अप्टिकल जूम, पेरिस्कोप टाइप + MP एमपी वाइड एंगल एफ / २.२ एपर्चर सहित
फ्रन्ट क्यामेरा एपर्चरf/ 32 संग 2.4 MP एपर्चरf/ 32 संग 2.4 MP
बैटरी द्रुत चार्ज W०W को साथ m,००० एमएएच द्रुत चार्ज W०W को साथ m,००० एमएएच
जडान ५ जी, डुअल सिम वाईफाई एसी, ब्लुटुथ ५.०, युएसबी-सी, ३.५ एमएम ज्याक, एफएम रेडियो, जीपीएस, ग्लोनास ५ जी, डुअल सिम, वाईफाई एसी, ब्लुटुथ ५.०, युएसबी-सी, ३.५ एमएम ज्याक, एफएम रेडियो, जीपीएस, ग्लोनास
अन्य अन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट रिडर अन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट रिडर
आयाम र तौल १158.5. x x .74.1१..8.8 x .196.5..XNUMX मिमी र १XNUMX ग्राम १158.5. x x .74.1१..8.8 x .198.5..XNUMX मिमी र १XNUMX ग्राम
यी उच्च दायरा भित्र दुई धेरै पूरा फोनहरु छन्, सामान्य मा राम्रो विशिष्टता संग। एक रोचक पक्ष यो हो कि उनीहरु पनि बन्छन् बजार मा पहिलो फोन सैमसंग को Exynos 980 को उपयोग गर्न को लागी. यो केहि महिना पहिले नै घोषणा गरीएको थियो कि यो यस्तो हुन गइरहेको थियो, र यो अन्ततः आधिकारिक बनाइएको छ। हामीले सम्झनु पर्छ कि हामी कोरियाली ब्रान्ड को पहिलो प्रोसेसर को सामना गरीरहेका छौं जुन पहिले नै संग आउँछ 5G natively एकीकृत।
यी Vivo X30 र X30 प्रो को बीच मुख्य फरक रियर क्यामेरा हो। सामान्य मोडलमा एक ट्रिपल क्यामेरा छ, जबकि प्रो मोडेल चार क्यामेरा संग आउँछ। यो प्रो मोडेल मा चौथो सेन्सर जोडियो, जो छ एक 13 MP पेरिस्कोप क्यामेरा 5x अप्टिकल जूम र 60x डिजिटल जुम संग पनि। एक मोड विशेष रूप देखि चन्द्रमा को फोटो लिन को लागी समर्पित गरीएको छ। बाँकी सेन्सर दुबै अवस्थामा समान छन्।
यी दुई फोन चीनमा लन्च हुनेछन्, एकमात्र बजार कि अब सम्म पुष्टि गरीएको छ। हामीलाई थाहा छैन यदि यी मोडलहरु अन्य देशहरुमा शुरू हुनेछन्, यद्यपि ब्रान्ड को उपलब्धता देखी, यो सम्भव छ कि यो एशिया मा मात्र रहनेछ। तर हामी कम्पनी बाट पुष्टिकरण को लागी पर्खनु पर्नेछ, जुन अधिक चाँडै जान्न सक्छ। दुई फोनहरु तीन फरक रंग मा शुरू गरीएको छ, हामी फोटो मा देखीएको छ। दुबै Vivo X30 र X30 प्रो कालो, सुन्तला, र खैरो र बकाइन को बीच एक छाया मा आउँछ।
Vivo X30 र्याम र भण्डारण को दुई संस्करण मा शुरू हुनेछ, 428 यूरो को मूल्य संग परिवर्तन गर्न को लागी 8/128 जीबी संग संस्करण को लागी। जबकि 8/256 जीबी संग संस्करण 463 यूरो को मूल्य संग परिवर्तन गर्न को लागी शुरू गरीएको छ। यो डिसेम्बर २ on मा सुरु हुनेछ, र ती जो यो पूर्व आदेश अब ब्लुटुथ हेडफोन प्राप्त।
Vivo X30 प्रो दुई संस्करण मा आउँछ। 8/128 जीबी संग संस्करण परिवर्तन को लागी 514 यूरो को मूल्य संग शुरू गरीएको छ, जबकि 8/256 जीबी संग संस्करण यस मामला मा परिवर्तन मा 553 यूरो को मूल्य संग शुरू गरिनेछ। यो मोडेल डिसेम्बर २४ मा सुरु हुन्छ, प्रि-अर्डर को लागी एक नि: शुल्क ब्लुटुथ हेडसेट संग।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Vivo X30 र X30 Pro: Exynos 980 XNUMX० को साथ फोनको नयाँ दायरा
गुगलले टर्कीमा सबै मोडेलका लागि GMS लाइसेन्स निलम्बित गर्‍यो
ZTE ले Axon 10s Pro 5G लाई स्नैपड्रैगन 865 र 5G नेटवर्कको लागि समर्थनको साथ प्रस्तुत गर्दछ